Somalia: Dib ha loo dhigo warbixinta UN - BBC News Somali
Somalia: Dib ha loo dhigo warbixinta UN
1 Agoosto 2012
Image caption Dowladda Somalia ayaa dowladda la siiyo waqti ay ugu soo jawaabto.
Somalia ayaa dooneysa in dib loo dhgo ka hadalka warbixinta Guddiga Daagalka Somalia.
Wasiirka Arrimaha dibadda ee somalia Abdulahi Haji Hassan oo maalmahan booqasho ku joogay xarunta UN ee New York ayaa la kulmay xubno ka tirsan golaha amaanka,gaar ahaan guddoomiyaha guddiga cunaqabetynta UN ee somalia iyo ergooyin kale.
Sida uu BBC u shegay diplomaasi ka tirsan safaadadda somalia ee UN, wasiirku waxaa uu soo jeediyey cabashooyin ay dawladda somalia ka qabto warbixinta iyo in dib goluhu ugu dhigo fadhiga uu ka yeelanayo warbixinta.
Omar Jamal oo ka mid ah diplomaasiyiinta ergada somalia u fadhiya xarunta UN ayaa BBC u sheegey in wafdiga dowladda ay qabaan in warbixintani ay khaldantahay oo ay dhib u dhac u keeni karto habsami u socodka howlaha kala-guurka ee Somalia.
Dowladda Somalia ayaa dooneysa in la siiyo waqti ay ugu soo jawaabta eedeymaha ku qoran warbixinta Guddiga Dabagalka Somalia.